sosegado : May 2010
Posted by sosegado at 5/30/2010 12:54:00 AM 25 comments Links to this post
အလုပ်ကလည်း ခုတလောတော်တော်များသည်၊ ဘလော့ဂ်လည်းမရေးဖြစ်၊ ကြားထဲ မလေးရှားနှင့် ဘရူနိုင်း သွားလိုက်ရသေးသည်၊ သူများရေးတာတွေပဲ လိုက်ဖတ်ဖြစ်နေပါသည်။
လောလောဆယ်တော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းပါပဲ၊ ရုပ်ရှင်ဆို ရုံမှာပဲကြည့်ရတာကြိုက်တယ်၊ မြန်မာကားဆို မကြည့်ရတာနှစ်နဲ့ချီပြီ၊ အရည်အသွေး မကောင်းဘူး ဘာဘူး ညာဘူး စသဖြင့် သူများတွေ ပြောတာနဲ့ အွန်လိုင်းကလည်း မကြည့်ဖြစ် ခွေလည်းမငှါးကြည့် ဖြစ်ခဲ့ပါ။
အသိ အကိုကြီးတစ်ယောက်ကောင်းမှု့နဲ့ ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာ ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်၊ မြန်မာကား၊ တရုတ်ကား၊ အင်္ဂလိပ်ကား စုံပါသည်၊ ကြည့်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဒီလိုပါ။
အဲဒီ အကိုကြီးက ကျွန်တော်တို့ နားမှာနေတာ၊ တစ်နေ့ ဖုန်းဆက်ပြီး ရုပ်ရှင်တွေကြည့်မလားလို့ လှမ်းမေးပါတယ်၊ မြန်မာကား၊ တရုတ်ကား၊ အင်္ဂလိပ်ကားတွေပါတယ် စုံအောင်ပါတယ်၊ ကားနာမည်တွေလည်း ရွတ်ပြတော့ စိတ်ဝင်စားသွားမိသည်၊ အကိုကြီးကို ကောင်းရဲ့လား၊ စီဒီခွေတွေ ဝယ်လှချီလားလို့ မေးလိုက်တော့၊ ခုကြည့်သလောက်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်၊ ခွေမဟုတ်ဘူးကွဆို၍ ပိုစိတ်ဝင်စားသွားမိသည်။
ဒီလိုနဲ့ အကိုကြီးအိမ်ကိုပေါက်ချလာသည်၊ ကျွန်တော်လည်း အကိုကြီး ဘယ်မှာလဲ cover တွေကြည့်ရအောင်၊ 14 Blade, Robin Hood, မြန်မာကားတွေလဲပါတယ်ဆို cover အရင်ကြည့်ရအောင်၊
အကိုကြီးက cover မရှိဘူး၊ မင်းမသိဘူးလား၊ ကျွန်တော်ကလည်း ဘာလဲအကိုကြီး ကျွန်တော်မသိဘူး၊
အကိုကြီးက အိတ်ထဲကနေ ၅ လက်မ ပတ်လည် box လေးတစ်ခုထုတ်လိုက်သည်၊ အကိုကြီးက အဲဒီထဲမှာပဲ၊
Movie Box လို့ခေါ်တယ်၊ Hard disc ရှိပြီး၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကိုသွင်းထားတာ၊ HD quality ကွ၊ HDMI ဆက်လို့ရသည်၊ ကျွန်တော်ကလည်း အကိုကြီး ဘယ်လိုရလာသလဲ၊ ငါ ပင်နီဇူလာသုံးထပ်ကငှါးလာတာ၊ တရားဝင်ထင်တာပဲ၊ MDA လိုင်စင်နဲ့ copy right အတွက်တောင် လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရသေးတယ်၊ တစ်ကား တစ်ရက် တစ်ကျပ်ပေးရတယ်၊ ၇ ကားယူရင် ၇ ရက်ထားလို့ရတယ်၊ ၁၄ ကားဆိုတော့ ၁၄ ရက်ပြည့်မှ ပြန်အပ်ပေါ့၊ စပေါ်မပေးရဘူး၊ IC copy ပဲယူထားတယ်၊ တစ်ချို့တွေ ကား ၃၀ တစ်လငှါးသွားကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အဲဒီ ကားတွေထဲမှာ ကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာကား ၅ ကားကတော့၊
ကြိုးတန်း၊ ဗိုက်ဗိုက်ဗိုက်၊ မောင်၊ သူငယ်ချင်းယောက္ခမ နှင့် အချစ်ကလန်းတယ် တို့ဖြစ်ပါသည်၊ ထူးထူးခြားခြားဆိုလို့ ကြိုးတန်း နှင့် ဗိုက်ဗိုက်ဗိုက် တို့ဖြစ်သည်။ ဗိုက်ဗိုက်ဗိုက်က ရယ်ရ၍ဖြစ်သည်၊ ကြိုးတန်းက စိတ်ဝင်စားဘို့ကောင်းသည်၊ အင်္ဂလိပ် စာတမ်းထိုးသည်၊ (ဘာသာပြန်သူ အမည်ရှာမတွေ့ပါ) ခင်ခင်ထူး၏ဇာတ်လမ်းကို နေဝင်းမြင့်က ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး ဒါရိုက်တာ မီးပွားရိုက်ကူးသည်၊ ဓါတ်ပုံ အကယ်ဒမီဆုရထားသော ကားဖြစ်သည်၊ မရှိတဲ့ သူတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်၊ ကျော်ဟိန်းက ကိုကျောက်နီ (တစ်ခါတစ်လေ ကိုကြီးကျောက်လို့ခေါ်ကြသည်) မြင်းလှည်း မောင်းရာက တံငါဖြစ်လာသူ၊ စိုးမြတ်သူဇာက သူ့မိန်းမ၊ ကျော်ရဲအောင်က ကိုလှဆောင် လှေသမား တံငါဖြစ်လာသူ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်က သူ့မိန်းမ၊ သောင်ကျွန်းလေးမှာနေကြရင်း လောဘကြောင့် ဒေါသဖြစ် အမှန်မမြင်မိတာကို ရိုက်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ကျော်ဟိန်းနှင့် ကျော်ရဲအောင်တို့ ကွာခြားပုံလေးတွေ့နိုင်သည်၊ HD ဖြစ်၍၎င်း သဘာဝကျအောင်ရိုက်ထား၍၎င်း ကျော်ဟိန်း၊ ကျော်ရဲအောင်၊ စိုးမြတ်သူဇာနှင့် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် တို့ရဲ့ မျက်နှာတွေကို အဖု အပိန့် အချိုင့်တွေကအစ မြင်ရသည်၊ ဇရာတွေပဲလား၊ တခြားကားတွေထဲက မိုးဟေကိုနှင့် မယ်လိုဒီ မျက်နှာလေးတွေကတော့ ချောမွတ်နေသည် (ဟဲဟဲ)၊ ကြိုးတန်း ဓါတ်ပုံနှင့် ရိုက်ချက်တွေက တော်တော်ကောင်းသည်၊ တိမ်အရောင်၊ အဖြူအမဲ၊ နေဝင်နေထွက်၊ မြစ်ကြောင်းမြစ်ပြင် ရိုက်ထားသည်များတော့ ဂျစ်တူးတို့မှ ပိုသိမည်။
နောက်တစ်ခါယူခဲ့ရင် ကျော်ရဲအောင် နှင့် စိုးမြတ်သူဇာ လွတ်အောင်ယူခဲ့လို့ မှာလိုက်မိသည်၊ သူတို့ကိုတော်တော်အီသွား၍ဖြစ်သည်၊ နောက်တစ်ခါမှပြန်ကြည့်မည်၊ မကြိုက်သော ဒီနှစ် အကယ်ဒမီဆုရထားသော မင်းသားဆိုရင် မယူခဲ့ဘို့အပြီးမှာလိုက်သည်၊ တရုတ်ကားရော အင်္ဂလိပ်ကားတွေရော Home Theater ဖြင့် ဖွင့်လျှင် အသံပိုကောင်းသည်၊ ကွန်ဖြူးရှပ်၊ ကရာတေးကဒ်စ် အသစ်ရရင်ယူလာဘို့မှာလိုက်သည်။
ကြိုးတန်း ဇာတ်လမ်းကို နေဝင်းမြင့်နှင့် မီးပွားက ဒီလိုသိမ်းလိုက်တယ်….
တဏှာလောဘကြောင့် လူတို့သည် ချမ်းသာကင်းသော သံသရာကို မလွန်မြောက်နိုင်ကြချေ။
ကြိုးတန်း ရုပ်ရှင်ကား အကြောင်း ဆက်ဖတ်ချင်ရင်
ဓါတ်ပုံကို www.perfectmagazineonline.com/journal/ent_new... ယူသည်၊
Posted by sosegado at 5/23/2010 07:24:00 PM 21 comments Links to this post
ပေါက်ပေါက်တစ်ယောက် နာရီကိုကြည့်လိုက် အိမ်ရှေ့ကိုကြည့်လိုက်နှင့် ပါးစပ်ကလည်း မြည်တွန်တောက်တီးနေသည်၊ လေးနာရီ လာမယ်ပြောထားပြီး ခုထိမရောက်လာသေးဘူး၊ တစ်ယောက်ထဲပြောလိုက်မိသည်၊
ကြားသွားသော အမလုပ်သူက၊ ‘ဟဲ့ နင်ဘယ်သူကိုစောင့်နေတာတုန်း၊ နိုင်ဝင်းဇော်ကိုလား၊ လာပါလိမ့်မယ်၊’
‘ဒါနဲ့နေပါဦး၊ နိုင်ဝင်းဇော်နှင့် နင်ကတွဲလာချည်လား၊ ရည်းစားဆိုလဲ ရည်းစားပေါ့၊ ကိုယ်လည်းသူ့ကိုကြိုက်နေတာပဲ၊ နင်လဲ အသက် ၂၀ ကျော်နေပြီ’
‘မမ ကလည်း အဖြေပေးမလို့၊ အခြေအနေ မပေးသေးလို့ ဇော် က ပေါက်ကို နားလည်ပြီးသား၊’ ပေါက်ပေါက် ပြန်ဖြေလိုက်သည်။
အမလုပ်သူက ‘အေးလေ’ ‘နင်တို့က ကိုးတန်းဆယ်တန်း ထဲကတွဲလာတာ ခု နောက်ဆုံးနှစ်တောင် စားမေးပွဲဖြေပြီးနေပြီ၊ နောက်မှ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်တွေ ကြားနေရဦးမယ်၊ နိုင်ဝင်းဇော်ထက် နင်ကိုိုကြိုက်တဲ့သူကို စောင့်နေတာလား၊’
ပေါက်ပေါက်ကရယ်ပြီး ‘မမ ကလည်း အချစ်ဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေ ပြောပြစရာ မလိုဘူး၊ နှစ်ယောက်စလုံး နှလုံးသားထဲက သိနေရင်ပြီးတာပဲ၊ မမကသာ ဟို အဝေးကြီးက လူကိုရည်းစားထားတော့ အမြဲလွမ်းနေရတာ၊’
ပေါက်ပေါက်က စကားပြောရင်း နာရီကိုကြည့်လိုက် အိမ်ရှေ့ကိုကြည့်လိုက် လုပ်နေသည်။
‘ဘာလုပ်မလို့၊ ဒီလောက်တောင်လောနေတာ’ အမလုပ်သူက မေးလိုက်သည်၊
‘ဆိုင်ကယ်လိုက်စီးမယ်၊ ပြီးရင်း ကန်တော်ကြီး တက်သေးအင်းမှာ တစ်ခုခုစားမယ်၊’ ပေါက်ပေါက်က ဖြေရင်း မျက်လုံးလေး ပေကလပ် ပေကလပ် လုပ်ပြလိုက်သည်။
‘ဒါဆိုလည်း Helmet ဆောင်းဘို့မမေ့နဲ့၊ ညည်း အမြဲတမ်းမဆောင်းချင်ဘူး၊’ အမကဆိုသည်။
ဝူး ကရူး၊ ယာမဟာ ဆိုင်ကယ် စက်သံကိုကြားလိုက်ရသည်၊
‘လေးနာရီ နှင့် ဆယ်မိနစ်ရှိပြီ၊ ဆယ်မိနစ် နောက်ကျတယ်၊ မမရေသွားပြီ၊’ ပြောပြီး ပေါက်ပေါက် အိမ်ရှေ့ပြေးထွက်သွားသည်၊
‘ဟဲ့ ဟဲ့ ဒီကောင်မလေး ဦးထုပ်ယူသွားဦး၊’ အမတစ်ယောက် Helmet ဦးထုပ်ကိုင်က အိမ်ရှေ့ထွက်လိုက်လာသည်၊
အိမ်ရှေ့တွင် ပေါက်ပေါက်နှင့် နိုင်ဝင်းဇော်တို့ မရှိကြတော့၊ ဟင်း ဟုသော သက်ပြင်းလေးသာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
တကယ်တော့ ပေါက်ပေါက်တို့ အိမ်က မင်္ဂလာလမ်းတွင်ရှိပြီး၊ နိုင်ဝင်းဇော်က မျက်ပါးရပ်တွင် နေသည်၊ မိဘချင်းရင်းနှီး၍ ကလေးတွေ အနေနီးစပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ဝင်းဇော် တစ်ယောက် မင်္ဂလာလမ်းရှိ အင်တာနက်နှင့် ဂိမ်းဆိုင်တွေလာရင်း ပေါက်ပေါက်နဲ့ တွဲဖြစ်ကြသည်။
နိုင်ဝင်းဇော်က တစ်ကယ် ဆိုင်ကယ်သရဲပင်၊ အစီးလည်းကျွမ်းသည်၊ စက်အကြောင်းလည်းနားလည်သည်၊ ဆယ်ကျောက်သက်အရွယ်ထဲက ဆိုင်ကယ်နှင့် ယဉ်ပါးနေသူဖြစ်သည်၊ တတိယနှစ်အောင်တော့ အဖေလုပ်သူက အလိုလိုက်ကာ ဆိုင်ကယ်ကို နယ်စပ်ကမှာကာ ဝယ်ပေးခဲ့သည်။
နိုင်ဝင်းဇော်တို့နှစ်ယောက် မင်္ဂလာလမ်းမှ အေလမ်းဘက်ထွက်လာပြီး၊ မေမြို့သွားတဲ့လမ်းဆီ မောင်းလာကြသည်၊
‘ပေါက်ကလေး ဒီနေ့ ၂၁ မိုင်ထိသွားဦးမလား၊’ နိုင်ဝင်းဇော်မေးလိုက်သည်၊
‘ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း၊ ဒီနေ့ စစ်ကိုင်းဘက်သွားမှာ၊ ပြီးရင် ကန်တော်ကြီးမှာ တစ်ခုခုစားမယ်၊ ပြောထားတာကို၊’ ပေါက်ပေါက်ကစိတ်ဆိုးသည့် ပုံစံလေးနှင့်ပြောလိုက်သည်၊
‘အေး ဒါဆို ငါတို့ ဒီဘက်ကပတ်ပြီး သိပ္ပံလမ်းဘက်ကပြန်ဝင်မယ်၊ ပြီးရင် စစ်ကိုင်းလမ်းဘက်ဆက်ကြမယ်၊ နင့်စိတ်ကြိုက်ပေါ့၊’ နိုင်ဝင်းဇော်က ချော့သလို ပြောလိုက်သည်၊
‘ဟေး ဇော် သိပ်လိမ္မာတယ်၊’ ပေါက်ပေါက်ဝမ်းသာအားရအော်လိုက်သည်။
တောင်မြို့ကျော်လာတော့၊ တစ်လမ်းမောင်းဖြစ်သွားသည်၊ ဆိုင်ကယ်သည် စစ်ကိုင်းဘက်ဆီသို့ ဦးတည်ပြေးနေသည်၊ ပေါက်ပေါက် ဆံပင်တို့ လေထဲမှာ လွင့်နေသည်၊ ဒါကို ပေါက်ပေါက်အရမ်းကြိုက်သည်၊ ဒါကြောင့်မို့ ဦးထုပ်မဆောင်းချင် နေကာမျက်မှန်ကြီးကြီးလေးပဲတတ်ချင်သည်၊ ဒက်ဒီ၊မာမီ၊ အမနှင့်် ဇော်တို့အတင်းပြောမှသာ ဆောင်းသည်၊
စစ်ကိုင်း ရတနာပုံ တံတားကြီးကိုဖြတ်၊ သံလမ်းကုန်းအောက်မှာ ပြန်ကွေ့ကာ မန္တလေးဘက်သို့ ပြန်လာသည်။
တံတားပေါ်ကအဆင်း သိပ်မကြာမှီ၊ အသံတစ်ခုကြားရပြီး၊ နိုင်ဝင်းဇော်တွန့်သွားသဖြင့် ပေါက်ပေါက်က ဘာဖြစ်တာလဲဟုမေးလိုက်သည်၊ နိုင်ဝင်းဇော်က ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး၊ ‘ငါလက်ကစားလိုက်တာ၊’
‘နင်ကလ’ဲ ဟု ပေါက်ပေါက်ကဆိုသည်၊
အပြန်လမ်း၊ ဖရဲသီးရောင်းတဲ့ ဆိုင်တန်းတွေကျော်လာသည်၊
၁၁၀mph ၊ ‘ဇော် နင်ကမြန်နေတာပ’ဲ ပေါက်ပေါက်ကဆိုသည်၊
‘နင်ပဲ ဒီလိုမြန်မြန်လေးမှဆို၊’ နိုင်ဝင်းဇော် ပြန်ပြောသည်၊
‘နည်းနည်းလျှော့ပါဦး၊ သိပ်မြန်ရင် ငါလဲကြောက်တယ်၊’ ပေါက်ပေါက် ပြန်ပြောသည်၊
‘အေးအေး၊ ဒါနဲ့ ပေါက်ကလေး နင်ငါ့ကိုချစ်လား၊’ နိုင်ဝင်းဇော် မေးလိုက်သည်၊
‘ဘာဆိုင်လို့တုန်း၊’ ‘အရှိန်နဲ့ဆိုင်တယ်၊’ ပေါက်ပေါက်မေး၍ နိုင်ဝင်းဇော် ပြန်ဖြေသည်၊
‘လူဆိုး၊ ကဲချစ်တယ်၊ အရှိန်လျှော့၊’ ပေါက်ပေါက် ပြန်ဖြေသည်၊
‘ဟေး’ နိုင်ဝင်းဇော် အော်လိုက်သည်၊
‘ကဲဒါဆို ငါ့ Helmet ကိုဖြုတ်ပြီး နင်ယူဆောင်းလိုက်၊’ နိုင်ဝင်းဇော် ပြောလိုက်သည်၊
‘နင်ကလ’ဲ ဆိုပြီး၊ ပေါက်ပေါက်ယူဆောင်းလိုက်သည်၊
‘သေချာဆောင်း၊’ နိုင်ဝင်းဇော် ပြောသည်၊
‘အေးပါ ဇော် အရှိန်လျှော့၊’ ပေါက်ပေါက် ပြန်ပြောသည်၊
အကွေ့ တစ်နေရာတွင် နိုင်ဝင်းဇော် လမ်းဘေးကဖြတ်မောင်းသည်၊
ဂလုပ် ဒုတ်ဒုတ်၊ ဆိုင်ကယ်က မညီသည်နေရာတွင်၊ နိမ့်ချီမြင့်ချီ၊
‘ဇော် အရှိန်လျှော့၊ ဖြေးဖြေး မောင်းပါဟ၊’ ပေါက်ပေါက်အော်လိုက်သည်၊
၉၀mph ၊ အရှိန်လျှော့ကျသွားသည် မြန်နေတုန်း။
ရှေ့နားမှာ ကန်တော်ကြီးဘက် ဝင်တဲ့လမ်း၊ ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေရှုပ်တတ်သည်၊ သစ်တင်ကားတွေလဲရှိတတ်သည်၊ နိုင်ဝင်းဇော်တွေးမိသည်၊
‘ပေါက်ကလေး နင်ငါကိုတအား သိုင်းဖက်ထားစမ်းပါ၊’ နိုင်ဝင်းဇော် ပြောလိုက်သည်၊
‘ဇော် နင်ဘာလုပ်ဦးမှာလဲ၊’ ဟုပေါက်ပေါက်မေးလိုက်သည်၊ ပြီးတော့ နိုင်ဝင်းဇော်ကို နောက်ကဖက်ထားလိုက်သည်၊
‘ခုငါပြောသလိုလုပ်၊ နောက်ဆို ပေါက်ကလေးစကား ဇော် တစ်သက်လုံး နားထောင်မှာ၊’ ‘မျက်စိမှိတ်ပြီး၊
နိုင်ဝင်းဇော်ကို ငါချစ်တယ်၊ ဆယ်ခါဆို၊ အဲဒါပြီးရင် အရှိန်လျှော့ပြီ၊’ နိုင်ဝင်းဇော် ပြောလိုက်သည်၊
‘ဆိုချင်ပါဘူး’ ဟုဆိုပြီး ပေါက်ပေါက်တစ်ယောက် နိုင်ဝင်းဇော်ကို ငါချစ်တယ်၊ စရွတ်တော့သည်။
ဘရှုး၊ ဝုန်း၊ ဂလပ်ဂလပ်၊
ဆိုင်ကယ်သည် လမ်းဘေးတွင် လမ်းပြင်ရန်ပုံထားသော သဲပုံကိုဝင်တိုက်သည်၊
ပေါက်ပေါက်က သဲပုံထဲတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်၊ ဆိုင်ကယ်နှင့် နိုင်ဝင်းဇော်က သဲပုံအပြင်ဘက်၊ ဆိုင်ကယ်တစ်ခြား လူတစ်ခြား။
နောက်တစ်နေ့ သတင်းစာထဲတွင်ပါ၍၎င်း၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူတွေ ပြောကြသည်မှာ၊ ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်က ညနေ ခြောက်နာရီ နှင့် နှစ်ဆယ်မိနစ်၊ ကောင်လေးက ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသတိရှိသေးတယ်တဲ့၊ ကောင်မလေးကတော့ မေ့နေတယ်၊ ကောင်လေးက သူ့ကို လာကူတဲ့သူတွေကို၊ ကျနော် ဆိုင်ကယ် ဘရိတ်ပေါက်ပြီး ဂီယာလည်း မကောင်းတော့ဘူး၊ အရှိန်လျှော့လို့မရဘူး၊ ကျနော့် ကောင်မလေး မသိအောင်၊ သူ့ ကြောက်စိတ် စိုးရိမ်စိတ်တွေမဝင်အောင်၊ သူ ဘာမှ မဖြစ်အောင် ကျနော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်၊ ရှေ့မှာ လမ်းကရှုပ်တော့မှာမို့ပါ၊ တကယ်လို့ ကျနော် မနေရတော့ဘူးဆိုရင်၊ ကျနော် သူ့ကို တအားချစ်တယ်ဆိုတာပြောပေးပါ၊ အဖေနှင့်အမေကိုလည်း ကျနော်သွားပြီလို့ ပြောပေးပါ၊ ကောင်လေးကို မန္တလေးဆေးရုံကြီးဆီ သယ်လာစဉ် လမ်းမှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်၊ ခေါင်းဒဏ်ရာကလွဲလုိ့ ဘာဒဏ်ရာမှ မရှိ၊
ကောင်မလေးက ခြေထောက်ကျိုးပြီး နှစ်ရက်လောက်မေ့နေတယ်။
သူတို့ ဝင်တိုက်တဲ့ သဲပုံရဲ့ ဘေးမှာ ကျောက်ပုံသေးသေးလေးတစ်ပုံရှိတယ်တဲ့။
နိုင်ဝင်းဇော်ရဲ့ အသုဘ ကို ရတနာပုံ တက္ကသိုလ်က သူငယ်ချင်းတွေရော၊ ဆိုင်ကယ်စီးဘက် သူငယ်ချင်းတွေရော၊ မိဘ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေ လိုက်ပို့ကြတာ စည်ပါတယ်၊ ပေါက်ပေါက်ကိုတော့ နှစ်ဖက်မိဘတွေက ဆေးရုံမှာပဲနေစေပါတယ်။
ပေါက်ပေါက်ရဲ့ အမ ပိုင်ပိုင်ကတော့၊ ပန်းတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ Helmet ဦးထုပ်ပုံ လေးကို နောက်ဆုံးလက်ဆောင်အဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပိုင်ပိုင် ရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့၊ နိုင်ဝင်းဇော်ရဲ့ အချစ်ကို တန်ဘိုးထားမိပါတယ်။
ဆိုင်ကယ် ကျွမ်းတဲ့ နိုင်ဝင်းဇော်ဟာ Helmet အရေးပါပုံကိုသိပါတယ်၊ အမြဲတမ်း Helmetနှင့် ဆိုင်ကယ်စီးသူပါ၊ ချစ်သူကို ဘာမှ မဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက် သူရဲ့ Helmet ကို ချစ်သူ ပေါက်ကလေးကို ပေးဆောင်းခဲ့ပါတယ်၊ တကယ်လို့ ပေးမဆောင်းခဲ့ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် ပေါက်ပေါက်တစ်ယောက် အိမ်က Helmet ဆောင်းသွားခဲ့ရင်၊ အဖြေဟာ တစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာပါ၊ Helmet ဆောင်းခိုင်းတိုင်း ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဘယ်သူမှာမဆောင်းဘူး၊ ခဏလေးပါ၊ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအမရာ စသဖြင့် ဆင်ခြေတွေ အမျိုးမျိုးပေးတတ်တဲ့၊ သူညီမ တစ်ယောက်တော့ တစ်သက်လုံး ရင်ထဲမှာဒဏ်ရာတစ်ခုရရှိသွားပါပြီ၊
တကယ်တော့ အချိန်တွက်ကြည့် လိုက်ရင် နှစ်နာရီ ဆယ်မိနစ် အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်သွားတာပါ။
ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း Helmet ဆောင်းခိုင်းတဲ့ ဥပဒေ ရှိခဲ့တာဖြစ်သည်၊
နောက်သတင်းတစ်ခုကတော့ နိုင်ဝင်းဇော်စီးတဲ့ ဆိုင်ကယ်ဟာ နိုင်ငံခြားမှာ ဘရိတ် ချို့ယွင်းချက်ရှိလို့ စက်ရုံက ပြန်ခေါ်ယူနေတဲ့ ယာမဟာ အမျိုးအစားပါ၊ ဆိုင်ကယ် ကျွမ်းတဲ့ နိုင်ဝင်းဇော် မသိခဲ့သလို၊ မြန်မာပြည်က ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ သူအများစုကသိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ON CERTAIN MOTORCYCLES, THE REAR BRAKE SHOE MATERIAL COULD SEPARATE DUE TO IMPROPER ADHESIVE CURING.
IF SUCH SEPARATION OCCURS DURING OPERATION, BRAKING ABILITY WITH THE REAR WHEEL WILL BE REDUCED OR LOST, WHICH COULD CAUSE A CRASH.
DEALERS WILL REPLACE THE REAR BRAKE SHOES. THE RECALL BEGAN ON OCTOBER 8, 2004. OWNERS SHOULD CONTACT YAMAHA.....
Posted by sosegado at 5/08/2010 09:08:00 PM 34 comments Links to this post
Posted by sosegado at 5/01/2010 09:20:00 PM 26 comments Links to this post